Cabdirashiid Janan oo ka warramay qaabkii uu xabsiga uga soo baxsaday - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Cabdirashiid Janan oo ka warramay qaabkii uu xabsiga uga soo baxsaday
Lahaanshaha sawirka MAXAMED QANI KUUSOOW
Image caption Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan booliska Adduunka ee INTERPOL weydiisatay in loo soo qabto Cabdirashiid Janan
Labadii sibuuc ee la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ayaa sheegeysay inay dadaal ugu jirto sidii ay dib gacanta ugu dhigi lahayd wasiirkii Amniga ee maamul goboleedka Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur(Janan), kaasoo ay sheegeen inuu ka baxsaday xabsi lagu hayay.
Xabsi la ima geynin
Waa kuma Cabdirashiid Janan?
Booliska caalamiga ee INTERPOL oo la weydiistay soo qabashada Cabdirashiid Janan
Lahaanshaha sawirka Jubbaland Tv
Image caption Waxaa lagu soo warramay in Janan uu Doon ku gaaray magaalada Kismaayo, maalmo ka dib markii uu baxsaday
Siduu ku baxsaday?
Image caption Cabdirashiid wuxuu sheegay inuu Muqdisho saddex maalmood ku sugnaa Muqdisho, ka dib markii uu baxsaday
Markii aan weydiinnay su'aasha ku saabsan inuu ka warramo qaabkii uu ku baxsaday, Cabdirashiid wuu qoslay, wuxuuna ka bixiyay sharraxaad:
"Way jirtaa inaysan cidna i sii deynin, howl aan aniga isku xirxiray oo uu Rabbi ii fududeeyay ayaan kusoo baxsaday", ayuu yiri.
Isagoo sii faahfaahinaya ayuu yiri: "Markii aan ogaaday inaan la i sii deyn doonin ilaa wax kasta oo ay dowladda federaalka rabto ay ka sameysato Jubbaland, waxaan go'aansaday inaan qorsheeyo sidii aan uga bixi lahaa gurigii la igu hayay, kaddibna shan boqol oo kiiloo mitir ayaan soo maray badda".
"Markii aan baxay kaddib saddex maalmood iyo saddex habeen ayaan joogay Muqdisho. Waxaana ii suurtagashay inaan xilli maalinnimo ah soo raacay doon. Doonta waxaa ii waday niman Soomaaliyeed oo iyaga iska leh, cidna ima soo raacin oo kaligey baan ahaa", ayuu yiri.
Janan ayaa ka gaabsaday inuu si cad u sheego magacyada dadkii garabka ku siiyay inuu baxsado.
Wuxuu si kooban u sheegay inay Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda gacan ku siiyeen inuu baxsado.
Dhinaca kalena wuxuu beeniyay warar sheegayay in diyaarad milatari oo ay leedahay dowladda Kenya lagu geeyay magaalada Nairobi.
Image caption Cabdirashiid Janan ayaa xabsiga dowladda Soomaaliya ka baxsaday 280kii January
Dadaalka ku saabsan dib usoo qabashada Cabdirashiid Janan
Hay'adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Kenya ka dalbatay inay xirto Cabdirashiid Janan, kaddibna ku wareejiyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Amnesty ayaa sheegtay in Janan uu ku eedeysan yahay "xadgudubyo waaweyn" oo ka dhan ah xuquuqul-insaanka, loona baahan yahay "inuu caddaaladda Wajaho".
Sidoo kale dowladda Federaalka Soomaaliya, oo dadaal ugu jirta dib usoo qabashada Cabdirashiid Janan ayaa codsatay in lo soo gacan galiyo.
Taliska booliska Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saaray 4-tii bishan February ayaa dowladda Kenya ka dabaday inay usoo xiraan Jajan, waxayna sidoo kale codsi u direen booliska adduunka ee INTERPOL, kuwaasoo ay weydiisteen inay ka caawiyaan sidii dib loogu soo gacan galin lahaa.
Laakiin dowladda Kenya kama jawaabin labada dalab midna.
Maamul goboleedka Jubbaland, oo si joogto ah u dhaliilayay xarigga Janan ayaa sheegay inuusan wax dambi ah lahayn, xariggiisii horena loo maray waddo aan sharciga waafaqsaneyn oo afduub ah.
Cabdirashiid ayaa dabayaaqadii bishii August ee sanadkii 2019-kii xabsiga loo taxaabay isagoo safar ku marayay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, tan iyo xilligaasna hal mar ayaa maxkamad tasoo taagay.